Tarsan “Aniga hadii hogaanka dalka aan qabto, sanad gudaheed Al-shabaab Muqdisho qof kuma dhex dilli doonto..” (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Tarsan “Aniga hadii hogaanka dalka aan qabto, sanad gudaheed Al-shabaab Muqdisho qof kuma dhex dilli doonto..” (DHAGEYSO)
Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqa magaalada Muqdisho islamarkaana haatan ka mid ah musharixiinta u tartameeysa xilka madaxtinimo ee Soomaaliya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa shaaca ka qaaday in hadii xilka madaxtinimo loo doorto uu ka taqalusi doono waxa la yiraahdo Al-shabaab.
Mr. Tarsan oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in sanad gudihiis uu Al-shabaab uga taqalusi doono, islamarkaana ay magaalada Muqdisho noqon doonto mid ammaan ah, isagoo tilmaamay inuu soo dhisi doono ciidamo ammaanka suga oo qaran ah, balse aanu ahayn ciidan qabiil lagu dhisay.
“Aniga hadii hogaanka dalka aan qabto, sanad gudaheed Al-shabaab Muqdisho qof kuma dhex dilli doonto, sababta waxay tahay waxaan dhiseeynaa hay’addaha amniga aanan qabiil ku dhisnayn, qof kasta oo hay’addaasi ka mid noqon doonna waxaan ku qiimeyn doonnaa kartidiisa iyo aqoontiisa” Sidaasi waxaa yiri Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ka mid ah musharixiinta u tartameysa xilka madaxtinimo ee Soomaaliya.
Dhinaca kale, Mr. Tarsan ayaa sheegay in amni darrida ka taagan magaalada Muqdisho ay sidoo kale ugu wacan tahay in mushaar aan la siinin ciidanka dowladda, taas oo niyad jab ku rideeysa ciidankii amniga magaalada suggi lahaa.
“Sababta kale ee amni darrada ugu wacan magaalada Muqdisho ayaa waxay tahay laaluushka iyo musuq-maasuqa ka jira dowladda dhexdeeda, askari amni lagu aaminay oo aan mushaar la siineynin siduu amni ku sugaa, isagoo ay caruurtiisa ka gaajeysan yihiin” Ayuu Mr. Tarsan hadalkiisa raaciyay.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka kasoo yeeray musharax Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa kusoo beegmaya xilli ammaanka magaalada Muqdisho uu maalinba maalinka kasii dambeeyso noqonaayo mid faraha kasii baxaaya, waxaana soo baxaayay dhaliilo badan oo loo jeedinaayo laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya.